YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, June 19
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်နေတဲ့ လန်ဒန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ
Published on Jun 19, 2012 by RFABurmeseVideo
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/19/20120အကြံပြုခြင်း
မွေးနေ့ရှင် မပါရှိဘဲ မွေးနေ့ပွဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပ
Published on Jun 19, 2012 by BurmaVJMedia
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ အသက် ၆၇ နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဥရောပခရီးစဉ်ကို ၁၈ ရက်ကြာ သွားရောက်နေတဲ့ အတွက် မွေးနေ့ရှင် မပါရှိဘဲ မွေးနေ့ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကိုတော့ နာယကအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုက သောင်းသောင်းဖျဖျ လာရောက် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ မွေးနေ့ပွဲမှာပဲ အမေ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်းတို့အတွက် အလှူငွေတွေကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ပန်းရဲ့လမ်း ကွန်ယက်၊ မြန်မာ့လူမှုဘဝ ကွန်ယက်တို့မှလည်း လာရောက် အားဖြည့် မွေးနေ့သီချင်းတွေ သီဆိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။
တဆက်တည်းပဲ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေက ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ အညတရ သူရဲကောင်းဆု ၅ ဆုကိုတော့ အကျဉ်းကျနေဆဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်စား မိသားစုဝင်တွေက လက်ခံခဲ့ကြပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ခင်ပွန်းသည်၊ သားနှစ်ဦးတို့နဲ့အတူ နှစ်အတော်ကြာ နေခဲ့ဖူးတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ်မြို့မှာ မိသားစုနှင့်အတူ မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်ရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံ
၁၈ ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ သူမတည်းခိုရာ Corinthian Hotel မှာ ၁၅ မိနစ်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မနက် ၁၀ နာရီ ၂၀ ကနေ ၁၁ နာရီ ၁၅ အထိ London School of Economics (LES) လို့ခေါ်တဲ့ လန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ သူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ညမှာ သူမမိသားစု ရှိတဲ့ အောက်စ်ဖိုဒ့်မှာ မွေးနေ့ပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
rby Khaing Kyaw on Tuesday, June 19, 2012 at 7:05am ·
ခုနက ရသေ့တောင်က မရီ: ဆီကို ဖုန်း ဆက် လိုက်ပါတယ်။
ရသေ့တောင်မှာ သတင်း သဲ့ သဲ့ ကြာ: ရလို. ပါ။
ဒီနေ. Bengali တွေ နှင်. ရခိုင် အဓိက ရုံး ဖြစ် နေပါ တယ်လို.ပြောပါတယ်။
Bengali တွေက ရခိုင်တွေလယ် ကန်သင်း မှာ သွားနေတာကို နောက်က လိုက် သတ် လို.စ ဖြစ်တာ ပါတဲ့။
ခု ညနေ လေးနာရီထိရခိုင်4ယောက် သေ ပြီ:4ယောက် ပျောက် နေပါ တယ် လို.ပြောပါတယ်။
ကူတောင် အပိုင်- ဥကာ ကျေ: ရွာ မှ ကျောင်း ဆ ရာ ဦး သိန်: ဟန် သေ ဆုံး သွားပါ တယ်
သူတို. ကို စာသင်ပေးနေတဲ. ကျောင်းဆရာ သော ဘာသော နားမ လည်ပါ ဘူ: ခင် ဗျား။
ဟို ဆရာက လယ်ကန် သင်း မှာ ပြေး နေ ရင်း လဲ ကျ သွားရာ Bengali တွေ က နောက်မှ လှံ နှင့် ထိုး လို. ပွဲ ချင်းပြီ: သေသွားပါ တယ်။
ဆရာဟာ Bengali နှင့် ရခိုင်များ ကို လူမျိုး မ ရွေ: ဘာသာ မ ရွေ: စေတနာ ထား စာသင် ပေး နေသူပါဗျာ။
အလောင်း တွေကိုတော့ Rohingya တွေက ဖျောက် ဖျက် သဖြင်. ပြန်ရရန် ခက်ခဲ ကြောင်းသိရပါတယ်။
စစ်တပ်က လည်း Rohingyas တွေကို အ ကာအကွယ် ပေးထားလို. ရခိုင်တွေမှာ တ ဖက် သတ် ခံ နေရ တယ်လို. လည်း မရီ: က ပြောတယ် ဗျာ။
ဘာသဘောလည်း ဗျာ။ မျိုးတုန်းအောင် သတ် စေချင်တာလား ဗျာ။
ဗြီ: တော့ရေနံဆီ, သံတုတ်, ငရုတ် ပုလင်း တွေကို Bengali မျာ: ရောင်းချ တော့ လည်း အကူအညီပေး နေ သေးတယ်။
စိတ်မ ကောင်းဘူ: ဗျာ။
အာဏာ ပိုင် အဖွဲ့ အ စည်းက နစ်ဖက် စလုံးကို ဝင် ထိမ်: တယ် ဆိုရင် လက် ခံပါ တယ်ဗျာ, ခုဟာက...
သ တင်း ရေးရင်း မျက်ရည်တောင် လည်မိ ပါတယ် ဗျာ။
စစ်တပ်ရဲ့ တိုင်းရင်း သား မြန်မာ , ရခိုင် တွေ အ ပေါ်ထား တဲ့ သ ဘောထားက ဘာလဲဗျာ။
လူစိတ်မှ ရှိကြသေးရဲ့ လား, ကိုယ့် ပြည်သူတွေကို အကာ အကွယ် ပေးရမယ် ဆိုတာ မရှိ တော့ဘူလား။
Dr Khaing Kyaw
“ဖြစ်တာက ကျောင်းဆရာဟောင်း ဥိးအေး...မောင်က ရှို့တာ၊ အရှို့ခံရတဲ့ အိမ်က မောင်ဖြူရှင်းဆိုတဲ့ ရွာလယ်မှာနေသူရဲ့ အိမ်ပါ။ တဦးနဲ့ တဦးလည်း ရန်ငြိုးရန်စမရှိပါဘူး” ဟု ယင်းရွာသားက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ် ပြောပြသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦးအသတ်ခံရမှု ဘင်္ဂါလီများ တူမီးသေနတ်သုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိသူများထဲမှ တစ်ဦးမှာ ယမ်းထောင်း တူမီးသေနတ် ထိမှန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင် မြို့နယ်ဆေးရုံ ဆရာဝန်၏ မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း ရသေ့တောင် ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွင် ဇွန်လ ၁၉ ရက်...နေ့က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း ကူတောင် ကျေးရွာ ဒေသခံများကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်အရ သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်ရာ အနောက်ပြင် ကျေးရွာမှ ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများသည် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ (ယနေ့) နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာ ကူတောင် ကျေးရွာကို ဝင်ရောက် မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသူများကို ပြန်လည် နှိမ်နှင်းလိုက်လံရာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနောက်ပြင် ကျေးရွာနားသို့ အရောက်တွင် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
“မီးတိုက်တဲ့သူတွေကို ရွာသားတွေက လိုက်ထုတ်ကြတယ်။ လိုက်ရင်းနဲ့ အနောက်ပြင် ရွာအနား ရောက်တော့ ဘင်္ဂါလီတွေ လူစုပြီး စောင့်နေတယ်။ အဲဒီမှာ အသတ်ခံရတာ။ ထောင်ချောက်ဆင် ထားတဲ့ ပုံစံပဲ“ ဟု ကူတောင် ကျေးရွာဒေသခံ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူများထဲတွင် ကျောင်းဆရာ နှစ်ဦး၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ စာရေးမ တစ်ဦး၊ အငြိမ်းစား တပ်မတော်သား တစ်ဦးတို့ ပါဝင်ကြောင်း ကူတောင်ကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
“သေသွားတဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်ပေးဖို့ စစ်တပ်က ပြန်တောင်းနေတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေက မပေးဘူး“ ဟု ကူတောင် ကျေးရွာမှ ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၇ ဦးအနက်မှ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား နှစ်ဦးကို ယနေ့ ညနေပိုင်းက ရသေ့တောင် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ ကုသခဲ့ရာတွင် တစ်ဦး ရရှိခဲ့သော ညာဘက်ရင်အုံ ပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာမှာ ယမ်းထောင်း တူမီးသေနတ် ထိမှန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင် မြို့နယ်ဆေးရုံ ဆရာဝန်၏ မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဦးမှာ ဦးနှောက် အာရုံကြောများ ထိခိုက်သွားသည်ဟု ဆေးရုံသို့ လိုက်ပါသွားသူ တစ်ဦးက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ယနေ့ ဖြစ်ပွားသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ကျေးရွာ အရေးအခင်းတွင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦး သေဆုံးကာ ၇ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၂ ဦး၏ အလောင်းကို ဘင်္ဂါလီလူကြီး အီဆူး အိမ်တွင် တွေ့ရကြောင်း ရသေ့တောင် ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice Weekly က ရသေ့တောင် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ သတင်းပြန်ကြားရေး အဖွဲ့များသို့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီခန့်က ဆက်သွယ် ခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
စစ်တွေ္ခတွင် ဇွန်လ ၃ ရက် ပဋိပက္ခ ပါဝင်သူများကို သက်ဆိုင်ရာ ဖမ်းဆီး
စစ်တွေမြို့ နာဇီ ရွာကျေးရွာမှ အမျိုးသား တစ်ဦး အသတ်ခံရသည်ဟု ယူဆကာ မြို့ခံများက ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းအား အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ပေးရန် ဝိုင်းဝန်း တောင်းဆိုကြရာ အချင်းချင်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညက ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ရခိုင် တု...ိင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ မြို့ခံများက အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြရာတွင် တဖြည်းဖြည်း လူများလာပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် မြို့ခံများအကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အဆိုပါ ရဲစခန်းရှိ ရဲများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးသွားသူ ၈ ဦးအနက် ငါးဦးမှာ ဘင်္ဂါလီများ၏ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု၊ နေအိမ် မီးရှို့မှုများကြောင့် အသက်ဘေး အန္တရာယ်ခိုလှုံနေကြသည့် ရခိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည် များကို ထောက်ပံ့ကူညီရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး The Voice Weekly က အမှတ် (၁) ရဲစန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ "အခင်းဖြစ်တုန်းက ဖမ်းထားတာ သုံးယောက်တော့ ရှိတယ်။ နောက်ဖမ်းတာတော့ မရှိပါဘူး။ ညဘက်မှာ ထွက်တဲ့သူတွေ ကိုတော့ ဖမ်းတယ်" ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ယင်းသို့ စစ်တွေမြို့ခံများနှင့် အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၁၂ ဦး ရှိကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကိတ်ကို အမေစုကိုယ်တိုင်လှီး။ ။
၁၉ရက်နေ့က Oxfordတက္ကသိုလ်မှ အမေစု ပညာသင်ဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံစဉ်...
LSE ဦးထုပ်လေးနဲ့ အမေစု
DVB Interview with DASSK
BBC WORLD NEWS WITH DASSK
ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ ဒေသဥက္ကဋ္ဌများ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ ခင်ဗျား-
ယနေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြသူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကြစေရန် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ် -
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ စတင်တာဝန်ယူတဲ့ ပထမနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်က စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတဲ့ ဒုတိယအဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးတို့ကို အရှိန်အဟုတ်မပျက် တိုးတက်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ရေးဆွဲလျာထားပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ မကြာမီ တင်သွင်းမဲ့ အမျိုးသား စီမံကိန်း (မူကြမ်း) ဟာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပဉ္စမကာလတို (၅) နှစ်စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ နှစ်စဉ် စီမံကိန်း (၂) ခုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း မှတ်တမ်းတင်၊ အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးချက်များအရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများရဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအချို့ကို လျှော့သင့်တာလျှော့ချ၊ တိုးသုံးသင့်တာ တိုးတက်လျာထားသုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ထပ်မံ လိုအပ်လာမဲ့ ရေရှည်အစီအမံများကို ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဉ္စမကာလတို (၅) နှစ်စီမံကိန်း (မူကြမ်း) (၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆) ကို လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာနိုင်မဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားကို မျှော်မှန်းလျာထားပြီး စီမံကိန်း ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း-
- တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (ဂျီဒီပီ) ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် ပုံမှန် ဈေးနှုန်းအရ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ (၇.၇%) တိုးတက်ရန်၊
- နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂျီဒီပီမှာ လယ်ယာကဏ္ဍကြီး၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၉.၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍကြီး၏ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၂၆.၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီး၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ၃၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၈.၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း အသီးသီးပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊
- လူတစ်ဦးစီ၏ ပျမ်းမျှ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး (Per Capita GDP) ကို အခြေခံ နှစ်ထက် (၁.၇) ဆ တိုးတက်စေရန် ရည်မှန်းထားပါတယ်။
တွက်ချက် ရရှိထားတဲ့ ဂျီဒီပီ တိုးတက်မှုနှုန်းအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပြည်သူများရဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်ဦးကျ ဂျီဒီပီဟာ အခြေခံနှစ်ထက် (၁.၇) ဆ ရရှိရန် တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ အနေနဲ့ကတော့ ပျမ်းမျှတစ်ဦးကျ ဂျီဒီပီကို အခြေခံနှစ်ထက် (၃) ဆ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်၊ အမှန်တကယ် ဝင်ငွေတိုးအောင် ကြိုးစားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ငါးနှစ်အတွင်းမှာ (၃) ဆတိုးအောင်ဆိုရင် လူ့စွမ်းအား၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီး နဲ့ နည်းပညာပေါင်းစပ်ပြီး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ငွေကြေး၊ အရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ရင်းနှီး သုံးစွဲနိုင်မှုကို သုံးသပ်ရင်-
- နိုင်ငံတော်၏ အရ-အသုံးငွေစာရင်း (အစိုးရဘတ်ဂျက်) အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊
- ပြည်ပအကူအညီ အထောက်အပံ့ (Grant) နှင့် ချေးငွေ (Loan) တိုးတက်ရရှိရန် လိုအပ်ခြင်း၊
- ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်ရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကို အဓိက တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ငွေကြေးအရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ရင်းနှီးနိုင်မှု ပမာဏထက် (၂) ဆခန့် တိုးတက်ရင်နှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက် နိုင်မှသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေတွေ တိုးတက်လာပြီး ရည်မှန်းထားတဲ့ (၃) ဆကို တိုးတက် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အရ-အသုံး ငွေစာရင်းကိုကြည့်ရင် (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လိုငွေ (-) ၂,၁၅၉,၅၃၄ ကျပ် သန်းရှိပြီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လိုငွေ (-) ၁,၉၅၃,၇၁၂ ကျပ်သန်းခန့် ဖြစ်ပေါ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်ဂျက်လိုငွေ နှစ်ရှည်ကြာစွာ ဖြစ်ပေါ်ပါက နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ ထိရောက်မဲ့လုပ်ငန်းများမှာ ထိရောက်အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုခြင်း၊ စီးပွားရေးတွက်ခြေမကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းများ၊ မလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကို လျှော့ချခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များ ချွေတာခြင်းတို့ကို တစ်ဖက်က လုပ်ဆောင် ရမှာဖြစ်သလို အခြားတစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခန်းကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (Privatization) ကို ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဒုတိယ အဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (Privatization) လုပ်ငန်းကို ထုခွဲ ရောင်းချခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ နိုင်ငံပိုင် အချိုးအစားများနေသော ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ သစ်တောကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ ငွေရေး ကြေးရေးကဏ္ဍများကို ကဏ္ဍတစ်ခုချင်း လေ့လာသုံးသပ်လျက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အချိုးအစားသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ ကူးပြောင်းပေးရင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအောင် အားပေးမြှင့်တင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အချိုးအစားပါဝင်မှုကို ပြည်လည်စိစစ်၊ သုံးသပ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်တဲ့ “ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်အသစ်” ကို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအနေနဲ့ မိမိတို့ တာဝန်ယူရတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ ဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းများအနက် မည်သည့်လုပ်ငန်းတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် (Reform Strategy) ကို ချမှတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Reform Strategy ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်း အမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် စီးပွားရေးပညာရှင်များနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဲ့ အစီအမံအဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ကဏ္ဍစီမံကိန်း တစ်ခုချင်းအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း (Development Plan) များကိုလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများကလည်း ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို အသေးစိတ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရန် အဆင့်ဆင့်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ စတင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ချိန်ဖြစ်လို့ အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း လိုအပ်ချက်များ ရှိနေမှာဖြစ်သော်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များအကူအညီဖြင့် ပိုမိုသိရှိနားလည် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မြို့အားလုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ မြို့အားလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း ကိုင်တွယ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လူအား၊ ငွေအားနဲ့ အမှန်တကယ် လိုအပ်မှုအနေအထား ရှိ/မရှိ သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရများကလည်း မိမိတို့ရဲ့ မြို့နယ်အားလုံးအပေါ် ခြုံငုံလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင် ပြည်သူတွေ လတ်တလော မြို့ကွက်၊ ရွာကွက် ချဲ့ပေးရန်လိုတဲ့ မြို့နယ်၊ သောက်သုံးရေဖူလုံရေးနှင့် သစ်တောသစ်ပင် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး ဦးစားပေး လုပ်ပေးရမဲ့ မြို့နယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက် နှစ်တိုနှစ်ရှည်စိုက်ခင်းများ၊ စက်မှုလက်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးထူထောင်ရမဲ့ မြို့နယ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ရမဲ့ မြို့နယ်တွေ စာရင်းပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ် ဦးစားပေးမြို့နယ်များကို နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဦးစားပေး အစီအစဉ် (priority) များ ရေးဆွဲထားပြီး ဘတ်ဂျက်၊ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဘယ်လိုရအောင် ကြိုးစားမလဲ၊ ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးစွဲ မလဲဆိုတာကို နှစ်အလိုက် အဆင့်ဆင့်စီမံကိန်း(Plan) ရေးဆွဲခြင်းဟာ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ပဉ္စမကာလတို ငါးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက် နှစ်သုံးဆယ် နှစ်ရှည်စီမံကိန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းအပြင် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(National Development Plan) ကို -
- လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း
- ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
- စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း
- ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
- ဒေသန္တရ စီမံကိန်းများ
- ကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းများဖြင့် (Comprehensive Development Plan) အဖြစ် ဆက်လက်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရများကလည်း (ဂျီဒီပီ) တိုးတက်ရေးထက် ပြည်သူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်အိမ်ထောင်ချင်းရဲ့ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘဝ မြင့်မားတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထု ဗဟိုပြုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး (People-Centered Development) လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးပြီး၊ အစီအမံရှိရှိနဲ့ မြေပြင်မှာ အမှန်တကယ်တိုးတက်အောင် ကျိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြား လိုပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ ဆက်လက် ပြောကြားလိုတာကတော့ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များကို ထိရောက်စွာရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များ (National Development Goals) နဲ့ ကမ0x081ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ (Millennium Development Goals) အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို လေ့လာကြည့်ရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ (Development Goals) နဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး စတဲ့ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက်များ (Millennium Development Goals) ကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံရဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီ အထောက်အပံ့ (Grant/Aid)၊ ချေးငွေ(Loan) နဲ့ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူ ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ ဒီလိုရယူဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ကူညီထောက်ပံ့ကြတဲ့နိုင်ငံများ၊ အလှူရှင်များအနေနဲ့ 0x158င်းတို့ ကူညီထောက်ပံ့လိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ နယ်မြေ/ ဧရိယာ ဦးစားပေးမှု အစီအစဉ်အမျိုးမျိုး၊ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိကြပြီး အကူအညီရယူတဲ့ နိုင်ငံကလဲ မိမိတို့ရဲ့ ဦးစားပေးကဏ္ဍနဲ့ နယ်မြေများကို မိမိတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း (Development Plan) နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာ(Reform Strategy) လုပ်ငန်းစဉ် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များနဲ့ အကျိုးရှိ ထိရောက်အောင် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ အကျိုးအမြတ် ပြန်ရချက် နည်းလို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုလုပ်ချင်တဲ့ နယ်မြေဒေသများ၊ အစွန်အဖျားဒေသများကို အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ (Grant/aid) ကို ဦးစားပေးသုံးစွဲပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ နယ်မြေများမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (Investment) နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချေးငွေ (Loan) ကိုတော့ အတိုးနှုန်း၊ ပြန်ဆက်ရမဲ့ ကာလနဲ့ ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (Project) ကို စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု၊ အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နိုင်မှု၊ ချေးငွေပြန်ဆပ်နိုင်မှု စတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ စဉ်းစားရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ ချက်ချင်း အကျိုးအမြတ် မပေါ်နိုင်သော်လည်း နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိမဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ကမ်း စတဲ့အခြေခံ အဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာတော့ လိုအပ်ချက်အရ သုံးကြရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ​တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ထိရောက်သော နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံများ စီမံခန့်ခွဲမှု (Effective Aid Management) ရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံ​တော်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ နဲ့ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ တို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား အကူအညီ အထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံချက်များ စနစ်တကျ ရေးဆွဲပြီး စီမံခန့်ခွဲ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်များ အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ကဏ္ဍစီမံကိန်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းများနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျုဟာလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ အညီ နိုင်ငံခြားအကူအညီ ( Grant/Aid ) အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ဦးစားပေး နယ်မြေများကိုလည်းကောင်း၊ ချေးငွေ (Loan) ရယူ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး မိမိတို့တာဝန်ယူ၍ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိ ထိရောက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးကကဲ့သို့ Top-Down ခွဲဝေချထားမှုမျိုး ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းနှင့်အညီ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍနှင့် နယ်မြေများကို အောက်ခြေအဆင့်ကစပြီး Bottom-Up လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် တင်ပြဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ ( ဥပမာ-ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှု ) ကလည်း မိမိတို့၏ ကဏ္ဍအလိုက် ချေးငွေမည်မျှ ရယူ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် တိုးတက်မှု မည်မျှရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွက်ချက်ပြီး တာဝန်ယူ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများက မိမိတို့တာဝန်ယူတဲ့ ကဏ္ဍတိုးတက်အောင် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မယ်ဆိုရင် Calculated Risk ဖြင့် နိုင်ငံခြားချေးငွေရယူပြီး ရဲရဲတင်းတင်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမှသာ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုစီးပွားရေး မထိခိုက်မဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပြည်သူများရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရာမှာ အလုပ်ရရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ ထိုက်သင့်သော အခြေခံလုပ်ခလစာများ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရေးအတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဘတ်ဂျတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံကိစ္စ ပြောကြားပြီးတဲ့နောက် တတိယပိုင်းမှာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အဓိကျတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့ ​ပြောကြားလိုပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဟာ အရေးကြီးပြီး လုပ်သာကိုင်သာရှိဖို့ လိုသလို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးမှုရှိမှသာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး မကြာမီမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုပြဋ0x081ဌာန်းနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မြန်မာ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ( မူကြမ်း) ကို ရေးဆွဲပြီး ဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ သဘောထားအကြံပြုချက်များ ရယူပြီးပါက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တို့ဟာ အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူများရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တစ်ဖက်က တိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်းရမှာ ဖြစ်သလို တစ်ဖက်ကလည်း မိမိနိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အကျိုးစီးပွား မထိခိုက်ရေး၊ နိုင်ငံဂုဏ်သိက0x081ခာ မထိခိုက်ရေး၊ နိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာ မထိခိုက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်ရေးတို့ကိုလည်း ရပ်တည်စောင့်ထိန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေသယံဇာတ၊ ရေသယံဇာတ၊ သစ်တောသယံဇာတ၊ သတ္တုသယံဇာတ စသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို နောင်သားစဉ်မြေးဆက်အထိ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်မဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Sustainable Development) ရရှိရေးကို စနစ်တကျ စီမံတွက်ချက် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ အခက်အခဲတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကတော့ မြေအသုံးချမှု (Land use) မြေကစားမှု (Land Speculation) စတဲ့ မြေယာ ပြဿနာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ကို ကြည့်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံထက်သာတဲ့ မြို့ပြ-ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းတွေနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ လူမှု စီးပွားရေးဘဝ မြင့်မားတိုးတက်မှု အခြေအနေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း(Regional Development Plan)၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း(City Development Plan)၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Township Development Plan)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Village Development Plan) တို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ကစပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်တစ်နယ်ရဲ့ အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ အချိုးအစားနဲ့ ပြည်သူတို့၏ နေမှုထိုင်မှုလိုအပ်ချက်၊ ပြည်သူတို့၏ စားသောက်မှု လိုအပ်ချက်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း လိုအပ်ချက်တို့ အတွက် လယ်ယာမြေများ၊ နှစ်ရှည်စိုက်ခင်းကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ၊ သစ်တော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ပြည်သူတို့၏ သောက်သုံးရေ လိုအပ်ချက် ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေနှင့် ပြည်သူတို့၏ သွားလာရေး လိုအပ်ချက်၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စသည့် ပြည်သူတို့ လိုအပ်ချက်ကိစ္စအဝဝကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြေအသုံးချမှု မူဝါဒ (Land Use Policy) နှင့် မြေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး(Land Use Management) တို့ကို စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။
သစ်တောမြေနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၊ အခြားမြေများတွင် တရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင် လုပ်ကိုင်ရာမှ 0x158င်းတို့ လက်ငုတ်လက်ရင်း ပိုင်ဆိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ အခက်အခဲရှိလာတဲ့ အတွက် အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ မြေဟက်တာ များစွာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေများ၊ မြေယာပြဿနာများကို နေရာအနှံအပြားမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။
နှစ်တိုနှစ်ရှည် စက်မှုကုန်ကြမ်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်နိုင်ရန် မိမိတို့၏ ပြည်သူများကို သစ်တောမြေနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၌ တရားမဝင် ကျူးကျော်နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းအစား မြို့ကွက် ရွာကွက်များ စနစ်တကျ ထူထောင်နေရာ ချထားပေးခြင်း ၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြေများချထားစီမံ ပေးခြင်း တို့ကို စုစည်းပြုလုပ်ပေးလျက် သစ်တော၊ သစ်ပင်နဲ့ နှစ်ရှည်ပင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးစိုက်ခင်း ကြီးများ ပြောင်းလဲထူထောင်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ထွန်းစေလျက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပြည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုတို့အတွက် မြေယာစနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် မြေယာစနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး (Land Reform) ကို ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ မြေယာအသုံးချမှု မူဝါဒများ ရေးဆွဲပြီး ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအတွက် မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ သတ္တု၊ ကျောက်မျက် ၊ စွမ်းအင် ၊ တွင်းထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေထုတ်လုပ်မှု၊ စိုက်ခင်းကြီးများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ အဆိုပါ ကော်မတီသို့ ​မြေယာ ခွဲဝေ အသုံးချရေး စိစစ်အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် ပေးပို့တင်ပြ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကော်မတီမှ စိစစ်ပြီးပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၊ မြေလွတ် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေညှိနှိုင်း ဆက်စပ်ဆောင်ရွက် သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေယာနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြေဧရိယာ ခွဲဝေ အသုံးပြုသည့် သတ်မှတ်ချက်များ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ကွဲပြားပြီး လက်တွေ့မြေပြင်၌ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေမှ နိုင်ငံတကာနှင့်အညီ ၊ ခေတ်နှင့်အညီ လက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ အတည်ပြု ပြဋ0x081ဌာန်းဆောင်ရွက်သွားမှသာ ထိရောက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ကွက်၊ ရွာကွက်၊ အိမ်ကွက်၊ စိုက်ကွက်နှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ကွက်များကိုလည်း တိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းကောက်ယူ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်မှုများကို အခွန်အကောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း၍ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း များ တိကျမှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကိုလည်း အခြေခံ ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ ဒေသများအနေနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ညှိနှိုင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနဲ့ ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် နယ်စပ်ဒေသ တွေမှာ နေရေးထိုင်ရေး၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရုံသာမက အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေရသူများ၊ မိမိဒေသများသို့ ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရန်-
- မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ နေရာချထားပေးခြင်း၊
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုစီးပွားရေး၊ အခြေအနေများ ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အဆင့်မှ စီးပွားဖြစ် အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် စီးပွားဖြစ် စိုက်ခင်းကြီးများ၊ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးများ၊ စက်ရုံစုကြီးများ၊ စနစ်တကျ ထူထောင်ပေးခြင်း၊
- ယင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်လီအဆင့်မှ လက်ကား ကုန်စည်ဒိုင်ကြီးများ၊ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များအဖြစ် ​​ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
- နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့မှသာ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီး အခက်အခဲကြားက ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ ပြည်သူများ အနေနဲ့ မိမိတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပြန်လည်လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်ရှိနေပြီး အောင်မြင်နေကြတဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလိုက် စီမံကိန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အတူ လာရောက်လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
စတုတ္ထပိုင်းအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်တလောလိုအပ်ချက်၊ ရေတိုလိုအပ်ချက်နှင့် ရေရှည်လိုအပ်ချက်များအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်မဲ့ ကိစ္စများနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ပြောကြားလိုပါတယ်။ ယခင် အစိုးရအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံဖြိုး တိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်ကို အာရုံစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ သာမန်အသုံးစရိတ်နဲ့ ငွေလုံးငွေရင်းအပါအဝင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၂,၈၀၂,၈၉၇) နှင့် နိုင်ငံခြားချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းလေးခုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆.၇) ဘီလီယံကျော် သုံးစွဲခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုစုစုပေါင်း ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၂,၂၂၆) ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၉,၇၁၁) အထိ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် တိုးတက်လာသောလူဦးရေနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တိုးတက်သုံးစွဲလာမှု ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမှာ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီကလဲ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့မှုအပေါ် ပြည်သူများအနေနဲ့ လျှပ်စစ်မီးလိုအင်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ လက်တလောအစီအစဉ်များကို အမြန်စီမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ရေတိုရေရှည်အတွက် ပြည်သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စွမ်းအင်နဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍကို ချိတ်ဆက်စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့စီမံကိန်းကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စွမ်းအင်ကိစ္စ အရပ်ရပ်အတွက် အမျိုးသားစွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (National Energy Management Committee) ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ရေတို၊ ရေရှည်အစီအမံများအတွက် အမျိုးသားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း(National Electricity Plan) ကို အမျိုးသားစွမ်းအင်မူဝါဒ (National Energy Policy) နှင့်အညီ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲ ပြီးရင် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သွားရမဲ့ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး စတဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်ကို ကုန်ကြမ်းအတိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှု မှ နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သာမက ဓါတ်မြေသြဇာလိုအပ်ချက်၊ ရေနံဓါတု ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များအား ရေရှည်မှာ ပြည်သူလူထု ဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးမှု (People-Centered Development) နှင့်အညီ ပြည်သူ့ကုန်စည် (Public Goods) များကို ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင် ဦးစားပေးအဖြစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအနေနဲ့ ရေတို၊ ရေရှည်အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရာမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမဲ့အပိုင်း၊ ဒေသအစိုးရများက ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမဲ့အပိုင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမဲ့အပိုင်းများကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်အစိုးရက ရေအားလျှပ်စစ်တစ်ခုတည်းအပေါ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်နှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုစရိတ်ကို အဓိကအခြေခံ၍ တွက်ချက်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်အရ နေရာဒေသ၊ ရေမြေ၊ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ် အခြေအနေအလိုက် ပြည်သူတို့၏ လက်ခံ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်သာမက သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ နေအား၊ လေအားနှင့် အခြားဇီဝနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလောင်စာတို့မှ ထုတ်လုပ်နိုင်သမျှ ထုတ်လုပ်ပြီး ဖြန့်ဝေပေးရေး ကြိုးပမ်းရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ရေးနဲ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ရည်မှန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ အဓိက အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဟာ အပြန်အလှန် ဆက်စပ်မှီခို နေတာကြောင့် (Energy Plan) နဲ့ (Industrial Development Plan) တွေကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲချမှတ်နိုင်မှ သာလျှင် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ် လောင်စာတန်ဖိုးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်၊ ခရီးအကွာအဝေး အလိုက် ဖြန့်ဖြူးမှုစရိတ်စက အပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းများနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် လျှပ်စစ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမည့် ဈေးနှုန်းများညှိနှိုင်းပြီး ဈေးနှုန်းမူဝါဒ (Pricing Policy) ချမှတ်ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအပိုင်းမှ နှစ်စဉ် တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကြိုးပမ်းမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ဖက်စပ်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ရေရှည်ဖြစ်နိုင်မည့် အစီအမံများကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင် အခန်းကဏ္ဍ အချိုးအစားနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အချိုးအစား ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မဲ့ အစီအစဉ်များကို အမျိုးသားစွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့ ပူးပေါင်းပြီးသက်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားကြရန် ပြောကြား လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ စတင်တာဝန်ယူတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပကတိလက်ရှိ အခြေအနေအပေါ် မူတည်စဉ်းစားပြီး စီးပွားရေးမူဝါဒ (၄)ရပ် ချမှတ်၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းကို ရေးဆွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမစီးပွားရေးမူဝါဒကတော့ ပြည်သူအများစု ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပျက် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရင်း အခြားနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာရေးဟာ အဓိကကျပါတယ်။ အစိုးရအ​နေနဲ့လည်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများကို အာရုံစိုက် ပြီး လုပ်နိုင်အောင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနတစ်ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အာရုံစိုက် မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍမှာ ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးထူထောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်စရိတ်ချေးငွေများ ယခုထက်ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် အစိုးရပိုင်းကရော ပုဂ္ဂလိကပိုင်းကပါ ပူးပေါင်းပြီး ငွေစုငွေချေးဘဏ်များ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း (Micro Finance ) များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တိုးတက်ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ သီးနှံများ ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး တောင်သူလယ်သမားများ တွက်ခြေကိုက်၍ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး၊ Transactional Cost များ လျှော့ချရေး၊ စိုက်ပျိုး နည်းပညာနှင့် စက်မှုလယ်ယာစနစ် ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ အထူးအလေးထား ကြိုးပမ်း သွားကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဆန်စပါးဈေး ကျဆင်းမှုအပေါ် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ပူးပေါင်း၍ ဝယ်ယူပေးသည့် လုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရများအနေနဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်မှုများ၊ တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေးတို့အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် ပေးသင့်တဲ့ နည်းလမ်းများရှာဖွေဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမူဝါဒရဲ့ ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်များအချိုးကျ မျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘဏ္ဍာငွေအရ/အသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များ၊ ဆင်းရဲမှုညွှန်းကိန်း လိုအပ်ချက်များ အရ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်များအကြား မျှတစွာ ခွဲဝေရရှိရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးချဲ့ဖိတ်ခေါ် ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနဲ့အညီ လေ့လာသုံးသပ်စီမံသွားကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘဏ္ဍာငွေအရ-အသုံးနှင့် နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရေးအတွက် မြို့နယ်အဆင့်အထိ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ် ပါတယ်။
စီးပွားရေးမူဝါဒ တတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ဘက်စုံတိုးတက်မှု အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအလိုက် စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း များကို အချိန်ကာလအလိုက် ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်အလိုက် (ဂျီဒီပီ) တိုးတက်ရုံသာမက လူတစ်ဦးကျ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး၊ အိမ်ထောင်စုအလိုက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်း (စား-ဝတ်-နေ-ရေး) တိုးတက်မှု ရှိရေးစတဲ့ ပြည်သူဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မှာကြားလိုပါတယ်။
စီးပွားရေးမူဝါဒ စတုတ္ထအချက်ဖြစ်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်းများ အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးနဲ့ တိကျမှန်ကန်ရေးအတွက်ကိုလည်း မြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီး တိတိကျကျကောက်ယူခြင်း Check, Recheck, Counter Check ဖြင့် ကွက်ကောက်ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း (Feasibility Study) တို့ဖြင့် ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် ကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိမှသာ မူဝါဒနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း (Decision Making, Policy Making) ကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား (Public Opinion) တွေကို ဆွေးနွေးရယူခြင်းနည်းလမ်းနဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည် လေးစားမှုဖြင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲ တိုးတက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မျိုးကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး လမ်းမပေါ် လူအုပ်နဲ့ထွက် အစုအဝေးနဲ့ သွေးထိုးမှု ပါလာတဲ့အခါ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ပြည်သူအများစုရဲ့ အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံမှုထိခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အထိ ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ သဘောသဘာဝကို ရင့်ကျက်ယဉ်ကျေးသော၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ညီညွတ်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ ကမ0x081ဘာ့အလယ်မှာသားစဉ်မြေးဆက် ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသော လူမျိုးများအဖြစ် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တို့ ပူးပေါင်းပြီးညီညီညွတ်ညွတ်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်တွဲကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အထူးပြုပြောကြားလိုတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းဟာ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးရော နယ်မြေအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်ပါ များစွာအရေးပါပါတယ်။ ဒီနေ့ စီးပွားရေးပညာရှင်များရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြည်သူလူထုတင်ပြလိုတဲ့ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနီးနီးကပ်ကပ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ နည်းလမ်းရှာဖွေ ဆွေးနွေးအဖြေရှာပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်-
- ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ လမ်းတံတားလိုအပ်ချက်တွေ၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အထိ အချိန်ယူတင်ပြမှုမျိုးအစား ဒေသအစိုးရနဲ့ ဒေသန္တရလွှတ်တော် အတွင်းမှာ ဦးစားပေး ကဏ္ဍနဲ့ ဦးစားပေးနယ်မြေတွေကို ညှိနှိုင်းလျာထားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် များစွာအကျိုးကျေးဇူး ရှိခြင်း၊
- မြို့နယ်များရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များ အနေဖြင့် မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများရေးဆွဲပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို နီးနီးကပ်ကပ် ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်နိုင်ခြင်း၊
- အစိုးရဌာနများနဲ့ ပြည်သူများအကြား ပွင့်လင်းထင်သာမြင်သာ ရှိလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ (Good Governance, Clean Government) ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ ပိုမိုတိုးတက် ပူးပေါင်း ပါဝင်လာနိုင်ခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို နည်းပညာ ပိုမိုဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်း၊
- ဒေသန္တရ၊ မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း၊
ပြည်သူလူထု၏ အခက်အခဲများကို ဒေသဆွေးနွေးပွဲများ၌ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ အောက်ခြေတွင် ဖြေရှင်းနိုင်သည်များကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ယနေ့ လမ်းမပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒပြရန်မလိုဘဲ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးချင်းရဲ့ စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့ တာဝန်ဟာ အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို အလေးအနက်ခံယူပြီး မည်သည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ အောက်ခြေအထိဆင်းပြီး အောင်မြင်သည်အထိ ဆောင်ရွက် သွားကြပါလို့ မှာကြားရင်းနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လတွင် စောင့်ကြည့်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ပြောကြား
ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လတွင် စောင့်ကြည့်ရန် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အော်စလိုညီလာခံ ပြင်ပတွင် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ က အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနသို့ ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နည်းတူ ဒီမိုကရေစီရေး ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပုံ ကွဲပြားသော်လည်း ဦးတည်ချက် တူညီပါကြောင်း၊ တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်း သွားနေပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း သူရဲကောင်းတစ်ဦးကို ကြိုဆိုသလို ကြိုဆိုနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက “ဒီအတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂုဏ် ယူပါတယ်။ သူ့(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဥရောပမှာ မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦးကို အခုလိုကြိုဆိုမှုဟာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုအတွက် နိုဗယ် မိန့်ခွန်း ကို ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ပြောကြား ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ ရှိနေ သေးကြောင်း၊ ယခုဒီနေရာကနေ သူ ပြောရခြင်းသည်လည်း သူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ချက် ကြောင့် အကျဉ်းကျသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်ပဲ တစ်ယောက်ဆို သလောက် များနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မလွတ်သေး သူများ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်လာရန်လည်း တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြရန် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် စပ် လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းအား အေအက်ဖ်ပီသတင်း ဌာနက မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက “ဇူလိုင်လကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၎င်းက အစိုးရအနေဖြင့် အမှုတွဲများကို ပြန်လည်ဆန်း စစ်နေကြောင်း၊ ကျန်ရှိသူများကို လွှတ်ပေးရန် မိမိတို့တွင် စိတ်ကူးရှိ ပါကြောင်း၊ စိတ်ကူးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမိန့် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်သား အစိုးရသစ် တက်လာပြီး တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နှစ်သောင်းရှစ်ထောင်ကျော်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ဇန်န၀ါ ရီလအတွင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နှစ်ကြိမ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းမှာ အမျိုးသားပြန်လည် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး တွင် အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးအ တွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုက ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း အသင်းအဖွဲ့အချို့မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည် ဆိုသူများအား လွှတ်ပေးရန် အမည်စာရင်းများ အသီးသီး ပေးပို့တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ စိစစ်တင်ပြထားသော အင်အား ၆၀၄ ဦးစာရင်းအား စိစစ်၍ လွှတ် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ် စာရင်းထဲတွင် ပါဝင် သူအားလုံး မလွတ်သေးကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးသည် မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဖော် ဆောင်မှု၊ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး တွင် အရေးကြီးသည့် ခြေလှမ်းများဖြစ်သဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ထောင်များတွင် ကျန်ရှိနေသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး ထပ်မံလွှတ်ပေးရေးကိုလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများက တောင်းဆိုထားကြသည်။ news-eleven.com
နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြား
Tuesday, 19 June 2012 15:36
ပြည်သူတို့၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့ အတွက် မြေယာစနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေး မြေယာစနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစုအဝေးနှင့် လမ်းမပေါ်ထွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် သွေးထိုးမှုပါလာသည့်အခါ၌ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုထိခိုက်သည်အထိ ပြောင်းလဲသွားတတ်သည့် ဖြစ်စဉ်ကို အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ပြည်သူများအားလုံးနှင့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ပူးပေါင်းပြီး ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက် သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်စိန်သည် ဇွန်လ ၁၉ ရက် နံနက် ၉နာရီ အချိန် တွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့်ခွန်း ပြောကြားသည့် အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသဥက္ကဌများ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် “မြို့ရွာဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ အခက်အခဲတွေ့နေရ တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကတော့ မြေအသုံးချမှု(Land Use)မြေကစားမှု(Land Speculation)စတဲ့ မြေယာပြဿနာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တစ်ချို့ကို ကြည့်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံထက်သာတဲ့ မြို့ပြကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းတွေနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဘ၀ မြင့်မားတိုးတက်မှု အခြေအနေတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြားနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့ အတွက် ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Regional Development Plan)၊ မြို့ပြဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း(City Development Plan) ၊မြို့နယ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (Township Development Plan)၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Village Development Plan)တို့ကို မြို့နယ်အဆင့်မှစပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်တစ်နယ်ရဲ့ အကျယ်အ၀န်း၊ လူဦးရေ အချိုးအစားနဲ့ ပြည်သူတို့၏ နေမှုထိုင်မှုလိုအပ်ချက်၊ ပြည်သူတို့၏ စားသောက်မှုလိုအပ်ချက်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လိုအပ်ချက်တို့အတွက် လယ်မြေများ၊ နှစ်ရှည်စိုက်ခင်းကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ သစ်တော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြည်သူတို့၏ သောက်သုံးရေ လိုအပ်ချက်၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေနှင့် ပြည်သူတို့၏ သွားလာရေး လိုအပ်ချက်၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စသည့် ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက် ကိစ္စအ၀၀ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြေအသုံးချမှု မူဝါဒ(Land Use Policy)နှင့် မြေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး(Land Use Management)တို့ကို စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။
သစ်တောမြေနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၊ အခြားမြေများတွင် တရားမ၀င် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင် လုပ်ကိုင်ရာမှ ၎င်းတို့ လက်ငုတ်လက်ရင်း ပိုင်ဆိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ အခက်အခဲရှိလာ တဲ့အတွက် အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ မြေဟက်တာများစွာကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံ မှုအတွက် ခွင့်ပြုမပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေများ၊ မြေယာပြဿနာများကို နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ နှစ်တိုနှစ်ရှည် စက်မှုကုန်ကြမ်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်နိုင်ရန် မိမိတို့၏ ပြည်သူများကို သစ်တောမြေနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၌ တရားမ၀င် ကျူးကျော်နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ခြင်းအစား မြို့ကွက် ရွာကွက်များစနစ်တကျ ထူထောင် နေရာချထားပေးခြင်း၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြေများ စီမံပေးခြင်းတို့ကို စုစည်းပြုလုပ်ပေးလျက် သစ်တော၊ သစ်ပင်နဲ့နှစ်ရှည်ပင်များ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေးစိုက်ခင်းကြီးများ ပြောင်းလဲထူးထောင်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် ရေရှည်ဖွံဖြိုးတိုးတက်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ထွန်စေလျက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပြည်သူတို့၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုတို့အတွက် မြေယာစနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် မြေယာစနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး(Land Reform) ကို ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတက”စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မျိုး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ် ဆိုပြီး လမ်းမပေါ်လူအုပ်နဲ့ထွက် အစုအဝေးနဲ့ သွေးထိုးမှုပါလာတဲ့အခါ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ပြည်သူအများစုရဲ့ အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံမှုထိခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အထိ ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ သဘောသဘာဝကို ရင့်ကျက်ယဉ်ကျေးသော၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ညီညွတ်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ သားစဉ်မြေးဆက် ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လူမျိုးများအဖြစ် အစိုး ရ၊လွှတ်တော်၊ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ညီညီ ညွတ်ညွတ် ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်တွဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မိန့်ခွန်းတွင်ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့်ခွန်းကို အပိုင်း ၄ ပိုင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပြီး ပထမအပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် ကိစ္စ၊ ဒုတိယပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံများကိစ္စ၊ တတိယပိုင်းတွင် နိုင်ငံဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အဓိကကျသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတိုးတက်ရေး ကိစ္စနှင့် စတုတ္ထပိုင်းတွင် နိုင်ငံအတွင်း လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Question about "R o h i n g ya":
Q: What should it be with regarding with their citizenship? Are they or they are not?
DASSK: I do not know because when you talk about the rohingya, we are not quite sure who you are talking about. As I said there isaproblem about who we are referring to. There is someone who say that those people who claim to be rohingya are not the ones who are actually native to Burma. But who are just come over recently from Bangladesh. But, on the other hand, Bangladesh says NO. They don’t want them as refugees. As they are not native to Bangladesh and they come over from Burma. So how do we sort this out? Without “RULE OF LAW”, without proper Immigration Processes, without proper policy, without appropriate implementation of the law. This is why I said the root of all this is “The RULE OF LAW” going back to many decades, not going back just to the crime that is just admittedacouple of months ago....
Oslo Peace Forum နောက်ဆုံးပိတ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။အဆုံးမှာပါ။ ။
၁၈ ဇွန် ၂၀၁၂။ အော်စလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ် တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှု
— in Oslo, Norway.
မွေးနေ့ရှင် မပါရှိဘဲ မွေးနေ့ပွဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်ရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသာ...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦးအသတ်ခံရမှု ဘင်္ဂါလီများ တူမ...
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ...